သာမန်လူ ဦးနှောက် နဲ့ စဉ်းစားလို့ လိုက်မမှီ တဲ့ ( က . ည . န ) ရဲ့ ကား တန်ဖိုး သတ်မှတ် ချက်များ – Shwewiki.com
မော်တော် ယာဉ် သက်တမ်းတိုး ဖို့ ပိုင်ဆိုင်သူ အမည်ပေါက် အခွန် ဆောင် ရတယ် ။ နိုင်ငံတော် ကို ကျသင့် ကျထိုက် တဲ့ အခွန်ဆောင်ရတာ လက်ခံ ပါတယ်။ ဘာမှ စောဒက မတက် လိုပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံး အများ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်လား။
ဒါပေမယ့် သက်ဆိုင် ရာ ဝန်ကြီးဋ္ဌာန က လူကြီးမင်းတွေ အနေနဲ့ ပြည်သူ တွေ အပေါ် အခွန်ပေးဆောင် ဖို့ ကားတန်ဘိုး သတ်မှတ် ချက်တွေ က လက်ရှိ ပြင်ပ ကားတန်ဘိုး (ပေါက်ဈေး) ထက် အများကြီး ပိုနေတာ တွေ ကို ပြန်လည် စဉ်းစား သုံးသပ် သင့်တယ် လို့ ယူဆ ပါတယ်။
ကျွန်တော် လွန် ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကျော် က လုပ်ငန်း သုံး ဖို့ အတွက် ဆူဇူကီး (ခွေးဘီလူး) Suzuki Carry Truck တစ်စင်း ဝယ် ခဲ့တာ သိန်း ၅၀ကျော် ပဲ ပေးခဲ့ရတယ်။ ကား က ၂၀၀၃ မော်ဒယ် အဟောင်း ရန်ကုန် မှာ လုပ်ငန်းထဲ သုံးထားတာ ၅နှစ်ကျော် ဆိုတော့ အတော့် ကို ဟောင်းနေ ပါပြီ။ ပြန်ရောင်းမယ် ဆိုရင် သိန်း၅၀ ပြန်ရဖို့ မလွယ်ကူ လှပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီး ဋ္ဌာနမှာ ရောက်တော့ သိန်း၈၀ နဲ့ တန်ဘိုးဖြတ်ထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီ ကိစ္စမှာ မြို့နယ် အခွန်ဦးစီး ဋ္ဌာနက တာဝန်ရှိတဲ့ အရာရှိတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင် သလို ပြန်လည် ဈေးဆစ်ခွင့်လဲမရှိတာမို့ ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ကျသင့်တဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်တဲ့ (၂၄၀,၀၀ဝိ) ကို ဆောင်ခဲ့ရ ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဋ္ဌာနက လူကြီးမင်းတွေ အနေ နဲ့ ကိုယ်ဖော်တဲ့ဆေး ကိုယ်ပြန်စား ရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိမယ် ဆိုရင် လူကြီးမင်းတို့ သတ်မှတ်ထား တဲ့ ကားဈေးနှုန်း အတိုင်း ပြည်သူတွေ ဆီက ပြန်ဝယ်ရဲ ပါသလား..။ မေးခွန်း ထုတ် ချင် ပါတယ်…။
ကျွန်တော့် ဆူဇူကီး ခွေးဘီလူး ကို လူကြီးမင်း တွေ သတ်မှတ် ထားတဲ့ သိန်း ၈၀ အတိုင်း ဝယ်မယ် ဆိုပါက လူကြီးမင်း တို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ဓာတ်ဆီ အပြည့်ဖြည့် ပေးပြီး ကျေးဇူး တင်စွာဖြင့် လာရောက် ပို့ဆောင်ပေး ဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေကြောင်း သတင်း စကား ပါးပါရစေ ခင်ဗျ ။
မှတ်ချက်။ ။ ပွဲစား မလို အပ်ပါ ။ (Than Lwin Ū)
သာမနျလူ ဦးနှောကျ နဲ့ စဉျးစားလို့ လိုကျမမှီ တဲ့ ( က . ည . န ) ရဲ့ ကား တနျဖိုး သတျမှတျ ခကျြမြား
မျောတျော ယာဉျ သကျတမျးတိုး ဖို့ ပိုငျဆိုငျသူ အမညျပေါကျ အခှနျ ဆောငျ ရတယျ ။ နိုငျငံတျော ကို ကသြငျ့ ကထြိုကျ တဲ့ အခှနျဆောငျရတာ လကျခံ ပါတယျ။ ဘာမှ စောဒက မတကျ လိုပါဘူး။ တဈနိုငျငံလုံး အမြား နဲ့ ဆိုငျတဲ့ ကိစ်စ မဟုတျလား။
ဒါပမေယျ့ သကျဆိုငျ ရာ ဝနျကွီးဋ်ဌာန က လူကွီးမငျးတှေ အနနေဲ့ ပွညျသူ တှေ အပျေါ အခှနျပေးဆောငျ ဖို့ ကားတနျဘိုး သတျမှတျ ခကျြတှေ က လကျရှိ ပွငျပ ကားတနျဘိုး (ပေါကျဈေး) ထကျ အမြားကွီး ပိုနတော တှေ ကို ပွနျလညျ စဉျးစား သုံးသပျ သငျ့တယျ လို့ ယူဆ ပါတယျ။
ကြှနျတျော လှနျ ခဲ့တဲ့ ၅ နှဈကြျော က လုပျငနျး သုံး ဖို့ အတှကျ ဆူဇူကီး (ခှေးဘီလူး) Suzuki Carry Truck တဈစငျး ဝယျ ခဲ့တာ သိနျး ၅ဝကြျော ပဲ ပေးခဲ့ရတယျ။ ကား က ၂၀၀၃ မျောဒယျ အဟောငျး ရနျကုနျ မှာ လုပျငနျးထဲ သုံးထားတာ ၅နှဈကြျော ဆိုတော့ အတေျာ့ ကို ဟောငျးနေ ပါပွီ။ ပွနျရောငျးမယျ ဆိုရငျ သိနျး၅၀ ပွနျရဖို့ မလှယျကူ လှပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ သကျဆိုငျရာ ပွညျတှငျး အခှနျဦးစီး ဋ်ဌာနမှာ ရောကျတော့ သိနျး၈၀ နဲ့ တနျဘိုးဖွတျထားတာ တှရေ့ ပါတယျ။ ဒီ ကိစ်စမှာ မွို့နယျ အခှနျဦးစီး ဋ်ဌာနက တာဝနျရှိတဲ့ အရာရှိတှနေဲ့ တိုကျရိုကျ မသကျဆိုငျ သလို ပွနျလညျ ဈေးဆဈခှငျ့လဲမရှိတာမို့ ပွညျသူတဈယောကျ အနနေဲ့ ပါးစပျပိတျပွီး ကသြငျ့တဲ့ ၃ ရာခိုငျနှုနျး ဖွဈတဲ့ (၂၄၀,ဝဝဝိ) ကို ဆောငျခဲ့ရ ပါတယျ။
သကျဆိုငျရာ ဝနျကွီး ဋ်ဌာနက လူကွီးမငျးတှေ အနေ နဲ့ ကိုယျဖျောတဲ့ဆေး ကိုယျပွနျစား ရဲတဲ့ သတ်တိ ရှိမယျ ဆိုရငျ လူကွီးမငျးတို့ သတျမှတျထား တဲ့ ကားဈေးနှုနျး အတိုငျး ပွညျသူတှေ ဆီက ပွနျဝယျရဲ ပါသလား..။ မေးခှနျး ထုတျ ခငျြ ပါတယျ…။
ကြှနျတေျာ့ ဆူဇူကီး ခှေးဘီလူး ကို လူကွီးမငျး တှေ သတျမှတျ ထားတဲ့ သိနျး ၈၀ အတိုငျး ဝယျမယျ ဆိုပါက လူကွီးမငျး တို့ အိမျတိုငျရာရောကျ ဓာတျဆီ အပွညျ့ဖွညျ့ ပေးပွီး ကြေးဇူး တငျစှာဖွငျ့ လာရောကျ ပို့ဆောငျပေး ဖို့ အဆငျသငျ့ ရှိနကွေောငျး သတငျး စကား ပါးပါရစေ ခငျဗြ ။
မှတျခကျြ။ ။ ပှဲစား မလို အပျပါ ။ (Than Lwin Ū)